खेलकुद » Home
काठमाडौ - नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवार्ड विमल घर्तिमगरको टोली टिसी स्पोर्टसले माल्दिभ्सको धिवेही प्रिमियर लिगमा शुक्रबार राति भएको खेलमा सहज जित हात पारेको छ। जितसँगै टिसीले ७ खेलबाट १२ अंक जोडेको छ। टिसी चौंथो स्थानमा रहेको छ। त्यत्तिनै खेलमा शीर्षस्थानमा रहेको माजियाको १७ अंक छ।पराजित निलान्धो.....
सिंगापुरमा भएको टी–२० विश्वकप एशिया छनोट खेलेर नेपाली टिम साेमबार राति स्वदेश फिर्ता हुने भएको छ । सिंगापुरसँग आइतबार भएको खेलमा ८२ रनले पराजित भएसँगै ग्लोबल छनोटमा पुग्न असफल भएको नेपाली टिम नेपाल फर्केका छन । पहिलो खेलमा कतारसँग पराजित भएको नेपाल अन्तिम खेलमा सिंगापुरसँग पराजित भएसँगै अर्को वर्ष हुने.....
एसियन साम्बो च्याम्पियन सिपमा नेपालका १५ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने !
काठमाडौं, १२ श्रावण - भदौ २६ देखि ३० गतेसम्म भारतको दिल्लीमा आयोजना हुन गईरहेको एसियन साम्बो च्याम्पियनसिपमा नेपालका १५ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । प्रतियोगितामा नेपालबाट ४ महिला खेलाडी र ११ पुरुष खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन । एसियन साम्बो च्याम्पियनसिपमा नेपालको तर्फबाट भगवती माझी, सब्बा.....
आइसिसी टी-२० विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनोट प्रतियोगितामा नेपालले मलेसियालाई ७ विकेटले पराजित गरेको छ। पहिलो खेलमा कतारसँग हार बेहोरेको नेपाललाई जितले ठूलो राहत मिलेको छ। बुधबार सिंगापुरको इन्डियन एसोसिएसन मैदानमा मलेसियाले दिएको ८४ रनको लक्ष्य नेपालले ६ बल खेल्न बाँकी छदा ३ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्‍यो।.....
बिबिसी-"ब्याट्सम्यानहरूको विस्फोटक ब्याटिङको सहयोगमा नेपालले मलेशियाविरुद्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० शृङ्खला छ रनले जितेको छ।" मलेशियाको किन्‌रारा मैदानमा पहिला ब्याटिङ गर्दै नेपालले १७३ रनको लक्ष्य आयोजक टोलीलाई दिएको थियो। तर मलेशिया १६७ रनमै सीमित हुनपुग्यो। यो जितसँगै नेपालले मलेशियाविरुद्ध.....
पारस खड्काको विस्फोटक ब्याटिङ, मलेसियालाई ७ विकेटले हरायो ! (भिडियो हेर्नुहोस)
मलेसियाविरुद्ध टी–ट्वीन्टी सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले सानदार जित हात पारेको छ । पारस खड्काको विस्फोटक ब्याटिङको मद्दतमा नेपालले मलेसियालाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो। मलेशिया भ्रमणमा रहेको नेपालले पहिलो टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलमा घरेलु टोलीमाथि सात विकेटको जित हासिल गरेको छ। दुई.....
"भारतलाई पराजित गर्दै न्युजिल्यान्ड विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।" २४० रनको लक्ष्य पछ्याएको भारत रनमा २२१ रनमा अलआउट भयो । ंभारतका लागि रवीन्द्र जडेजाले ७७, महेन्द्र सिंह धोनीले ५० र हार्दिक पाण्ड्या र रिषभ पन्तले समान ३२ रन जोडे पनि टिमलाई जिताउन सकेनन् । रवीन्द्र र धोनीले ११६ रनको साझेदारी.....
चिन विरुद्ध नेपालको सानदार जित, नेपालले ५ ओभरमा नै हरायो !
एसिसी यु-१९ पूर्वी क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले सानदार सुरुवात गरेको छ। बुधबार भएको खेलमा नेपालले चीनलाई १० विकेटले हराउँदै उत्कृष्ट सुरुवात गरेको हो।मलेसियाको किनरारा ओभलमा चीनले दिएको ५४ रनको लक्ष्य नेपालले विना विकेटको क्षतिमा ५ ओभरमै पूरा गर्‍यो। नेपालको जितमा पवन सर्राफले नटआउट ४६.....
अस्ट्रेलियाले आयोजक इंग्ल्यान्डलाई दियो २८६ रनको लक्ष्य !
आइसिसी क्रिकेट विश्वकपमा अस्ट्रेलियाले आयोजक इंग्ल्यान्डलाई २८६ रनको लक्ष्य दिएको छ। लन्डनको लर्ड्स मैदानमा टस जितेको इंग्ल्यान्डले फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले ५० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा २८५ रन जोड्यो। अस्ट्रेलियाका लागि ओपनर तथा कप्तान आरोन फिन्चले शतक प्रहार गरे। ११६ बलको.....
छैठौं राष्ट्रिय “साम्बो च्याम्पियनशीप”को उपाधि काठमाण्डौलाई !
काठमाडौं- नेपाल साम्बो फेडरेसनले आयोजना गरेको छैठौं राष्ट्रिय साम्बो च्याम्पियनशीपमा काठमाण्डौको गोङ्गोबु डोजो टिम च्याम्पियन भएको छ । शनिवार काठमाण्डौको नयाँ बजारमा भएको प्रतियोगितामा काठमाडौको गोङ्गबु डोजोले उपाधि उचालेको नेपाल साम्बो फेडरेसनका उपाध्यक्ष रमेश पौडेलले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रतियोगितामा.....